पौडेल समूहबाट प्रकाशमान सिंह आउट !
काठमाडौं। सभापतिको साझा उम्मेदवार टुंग्याउन भन्दै नेपाली काँग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक पुन आज साँझ बस्ने भएको छ।
शुक्रवार महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम सुरु हुनु केही समय अगाडि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा भएको छलफलमा साझा उम्मेदवार तय गर्न नसकेपछि बैठक पुनः बस्ने भएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए।
पौडेल निवास बोहराटारमा साझा उम्मेदवारका लागि नेताहरू मिनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापालगायत नेताले पहल गरेका थिए।
संस्थापनइतर समूहबाट एकल उम्मेदवार तय गर्न भएको पटक-पटकको प्रयासमा नेता प्रकाशमान सिंह सहमतिमा नआएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार एकल उम्मेदवार तय गर्न सिंह सहमतिमा नआएपछि उनी सो समूहबाट ‘रिङ आउट’ हुने भएका छन्।
संस्थापनइतर समूहबाट सुरुमा रामचन्द्र पौडेल, डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइराला मध्येबाट एकल उम्मेदवार बनाउने प्रयास भएको थियो।
सहमति जुटेमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने दौडबाट वरिष्ठ नेता पौडेल र डा। शशांक कोइराला केही दिनअघि नै ब्याक भए पनि शेखर र प्रकाशमानबीच सहमति हुन सकेको थिएन। शेखर र सिंह दुई नेताबीच सहमति जुटाउन बुधवार भएको छलफलमा सिंहले अड्डी कस्दै आफूपछि नहट्ने बताएका थिए।
सिंहको यस्तो अडानपछि वरिष्ठ नेता पौडेल सिंहको अर्घेलोबाट दिक्क भएपछि आफू काँग्रेसको राजनीति नै छोड्ने भन्दै चाक्सीबारीको छलफल नै छोडेर हिँडेका थिए।
नेताहरूको अडानले अप्ठेरोमा परेका पौडेलले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नै उपस्थित नहुने र काँग्रेसको राजनीति समेत छोड्ने चेतावनी दिएका थिए।
शुक्रवार बिहान पौडेल निवास बोहराटारमा भएको छलफल पछि नेताहरुबीच सिंहले आफ्नो अडान नछोडेकाले उनलाई सँगै लैजान नसक्ने निष्कर्ष निकालेको सहभागी एक काँग्रेस नेताले बताए।
सो क्रममा बरु वरिष्ठ नेता पौडेललाई साझा उम्मेदवार बनाउने र छिटै घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। भेटमा सहभागी नेता महेश आचार्यले बोहोराटारमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘साझा उम्मेदवार तय गर्ने बारेमा नै छलफल भयो। त्यस्तै महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा नेताहरूले सम्बोधन गर्दा आफ्ना तर्फका प्रतिनिधिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा समेत कुराकानी भयो,’ उनले भने।